कालो हरीण केशमा फसे सलमान खान, हुन सक्छ ६ वर्षको जेल सजाय ! - Nepali Cinema News
Home > Bollywood > कालो हरीण केशमा फसे सलमान खान, हुन सक्छ ६ वर्षको जेल सजाय !
कालो हरीण केशमा फसे सलमान खान, हुन सक्छ ६ वर्षको जेल सजाय !
April 05, 2018 Bollywood
बलिउड अभिनेता सालमान खानको २० वर्ष पुरानो केस बल्झीएको छ । कालो हरीण शिकार काण्डमा जोधपुर अदालतले बन्यजन्तु संरक्षणको धारा ९,११ अन्र्तगत सलमानलाई दोषी ठहर गरेको हो । उनलाई ६ वर्ष सम्मको जेल सजाय हुन सक्ने भारतीय संचार माध्यम एनडी टिभिले समाचार प्रकाशीत गरेको छ ।
यो केसमा सलमान सँगै नाम जोडीएका सैफअलि खान,सोनाली बेन्द्रे,तब्बु र नीलनलाई अदालतले सफाई दिएको छ ।
१९९८ मा फिल्म हाम साथ साथ है को सुटिङ्ग गर्ने बेला सलमान माथी दुई ओटा कालो हरीण शिकार गरेको आरोप लागेको थियो । यो केसमा सलमान सँग यसै फिल्मका अन्य कलाकारको पनि नाम जोडीएको थियो, तर अदालतले अन्य सबै कलाकारलाई सफाई दिएको छ ।
यसै विषयमा सरकारी वकीलले भारतीय संचार माध्यमहरुलाई बताए अनुसार, सुटिङ्गको दौरान एउटै गाडीमा सलमान सँग अन्य कलाकारहरु पनि थिए । गाडी सलमानले चलाईरहेका थिए ।
बाटोमा हरीणको भिड देखेपछि सलमानले गाडी रोकेर गोली चालाएका थिए । उनले चलाएको गोली लागेर दुई ओटा हरीण मरेका थिए ।
मरेका दुई हरीण गाडीमा हाल्न खोज्दा उनिहरुलाई स्थानीयले देखेपछि सलमान लगायत सबै कलाकार हरिणलाई त्यही छोडेर भागेका थिए । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा हरीणलाई लागेको गोली सलमान खानको पेस्तोलकै भएको प्रमाणीत भएको थियो ।